Nhau - Yakakurumbira Wholesale Bamboo chizi mabhodhi
Yakakurumbira Wholesale Bamboo cheese board
Nei Tsika Yakagadzirwa Zvigadzirwa?
Tsika dzakashambadzirwa zvigadzirwa chishandiso chakashambadzirwa chishandiso chinodhura-chinoshanda uye chinosimudzira chisingaperi chiziviso chiziviso. Zvigadzirwa zvine marondedzero inzira yakakwana yekusimudzira kuoneka kwechiso kana kukoshesa vashandi kunyangwe uri mubatanidzwa wakakura kana bhizinesi diki. Vanoitawo zvipo zvakakura zvakagadzirirwa mapato, michato, uye zviitiko zvakakosha. Gadzira inogara isingaonekwe nezvakagadzirwa zvakagadzirirwa zvigadzirwa!
Ndezvipi Zvakanakisa Zvekusimudzira Zvigadzirwa zvekupa Kure?
Chimwe chezvinhu zvinonyanya kushambadzira zvigadzirwa ndeye tsika Cheese mabhodhi. Tsika Cheese mabhodhi akakwenenzverwa, akaisvonaka zvipo, chinhu chinopa A banga neforogo fittings, sevanhu vanozvishandisa nguva dzose.
Nei Order Wholesale Cheese bhodhi?
Heano angori mana ezvikonzero zvakawanda zvekuhodha marita Cheese mabhodhi:
1. Kukosha kwemari - Tsika dzakadhindwa Cheese mabhodhi anofadza. Unogona kuwana mabhodhi eCheese akawanda nemari inosvika $ 9- $ 15 imwe neimwe.
2. Kubatsira - maTotes anobatsira chaizvo. Wese munhu Cheese mabhodhi, angave ari kuParty, pazororo, paKuvaraidza, kana kunotora grocery.
3. Kugadzikana - Mabhegi edu akadhindwa anogara kwenguva refu, zvinoreva kuti iwe unokwanisa kuatakura iwo nezvimwe zvekusimudzira magiya, zvekushandisa zvebasa, kutenga, nezvimwe. Wobva waishandisa nguva nenguva.
4. Kuonekwa kweBrand - Kuisa mari mune yemhando, chigadzirwa chinobatsira kunowedzera mikana yemumwe munhu anochishandisa, izvo zvinobatsira zita rako kusvika kunyange kune vangangove vatengi. Yakagadzirwa-yakasarudzika tsika logo bhegi inotora yako mhando dzese nzvimbo dzenzvimbo!
Ndeupi Pakcing Waunogona Sarudza?
1.Simple uye yemakwikwi mutengo White bhokisi
2.We matema mazwi anodhinda brown bhokisi
3.Luxury chimiro chevara bhokisi
Unogona kusarudza zambuko dhizaini ipe yemahara kubhadharisa bhokisi dhizaini kana kupa yako timu
Post nguva: Chivabvu-31-2021